Ukubanjwa kwepharamitha ye-2.6 Dynamic -e-Geofumadas
I-2.6 Dynamic ifomathi yokuthwebula
Oku kungasentla kwicandelo elidlulileyo ngokubhekisele kwiwindows yelayini yomyalelo kusebenza ngokupheleleyo kuzo zonke iinguqulelo ze-Autocad, kubandakanya nezo ezifundwayo kule khosi. Nangona kunjalo, ngokwenguqulo ye2006, umahluko obonakalayo waqukwa ukuba, ukongeza ekubonakaleni, uluncedo kakhulu xa usenza kunye / okanye uhlela izinto. Imalunga nokubanjwa kwepharamitha okunamandla.
Iinketho ezibonelelwe ngewindows yelayini yomyalelo ziyelelene, umahluko kukuba iiparameter (ezinjengezihlanganisi zephuzu okanye ixabiso lomgama wobubanzi besendlalelo - njengoko besisebenzisa kumzekelo odlulileyo) ) zifakiwe kwiibhokisi zokubhaliweyo ezibonakala ecaleni kwesikhombisi. Ezi bhokisi zinikezela ngeendlela ezifanayo njengewindows yomyalelo kunye nezinye ezazifudula zingumxholo womxholo. Ukongeza, ecaleni kwesikhombisi sibona ulwazi olufanelekileyo ngokubhekisele kwinto esiyidwebayo ngokwamandla, oko kukuthi, olu lwazi luhlaziywa njengoko sihambisa isikhombisi. Masiyibone ngokubonakalayo ngemodeli efanayo yesangqa.
Masithi sicinezele iqhosha ukwenza imijikelezo yeqela elithi "Ukuzoba" kwi "Start" tab. Ngaphambi kokubonisa indawo yeziko, makhe sijonge izinto ezongezwe kwisikhombisi kwaye sivumele ukubanjwa okunamandla kweeparamitha.
Qaphela ukuba akunakwenzeka ukukhetha ukhetho kwibar ye-ezantsi kunye ne-pointer efanayo, kuba ibha leyo iqhotyoshelwe kuyo. Ke ngoko, indlela yokubonisa ukhetho lusebenzisa utolo olusezantsi kwikhibhodi. Le nkqubo ilingana nokucinezela unobumba omkhulu wenketho efunekayo kwifestile yomyalelo.
Uluvo olusebenzisa eli nqaku le-Autocad kukuba umsebenzisi, xa edala okanye ehlela izinto, unako, xa ethimba iiparameter okanye ekukhetheni ukhetho apho ikhesa likhona, ukuba bajolise ingqalelo yabo kwindawo yokuzoba, ngaphandle kokutshintsha umbono phakathi Iscreen kunye nefestile yomgca wokuyalela, nangona akwanelanga ukusasaza ngokupheleleyo ngento yokugqibela. Ngokuchasene noko, ihlala inokwenzeka into yokuba kukho abo banqwenela ukwenza imveliso eguquguqukayo ye paramitha, ngakumbi xa besebenza kwimizobo enobunzima obuncinci obunokubangela inani elincinci lezinto ezikwisikrini zinqwenelekayo. Ukwenza / ukukhubaza ukubanjwa kwedatha okunamandla kunye nokubonisa, sisebenzisa eli qhosha elilandelayo kwi-bar yesimo.
Ukucwangcisa indlela yokusebenza yokubamba ngamandla, sisebenzisa ibhokisi yencoko evulwa nangayiphi na kwezi ndlela zilandelayo: ngokuchwetheza kumgca womyalelo wokuyalela "PARAMSDIB" umyalelo, okanye ngokunqakraza kwi icon enamandla egalelo Ibar yendawo eneqhosha lasekunene.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ukususela ngoku ukuya phambili, xa kufuneka kuboniswe ukubanjwa kweeparamitha zokudalwa okanye ukuhlelwa kwezinto, siya kukutshintsha ukusetyenziswa kwegalelo elinamandla kunye naloo festile yomyalelo, kuxhomekeka kwinto ecacileyo kwimibandela ye-didactic. Ngamanye amaxesha siya kusebenza okanye senze njengoko sibonisa kwividiyo edluleyo.
Indlela yokufaka iparamitha kulwakhiwo lwezinto ozisebenzisayo iya kuxhomekeka kukhetho lwakho, ukuba nje uyazi kakuhle iinkqubo zomsebenzi xa uzoba.
Post edlulileyo«Edlulileyo Award abaphumeleleyo MundoGEO # Connect 2012
Post Next 2.7 Ibha yomgangathoOkulandelayo "